Astaamaha vitamin la’aanta? |
Astaamaha vitamin la’aanta?
Fitamiinka hadduu qofka ku yaraado waxuu dareemaa astaamo u gaar ah fitamiinkaas jirka ka maqan, hadduu qofku xanuusnan yahay ama uusan qaadan karin cunno isku-dheelli tiran ama u baahan yahay fitamiin dheeraad ah sida xililga uurka oo kale waa in uu qaataa iyadoo daawo ah si jirka uu uga faa’idaysto, laakiin intaas haddii aysan jirin oo qofka cunnadiisa isu dheelli tiran tahay, uma baahna kaniini ama sharoobo fitamiin ah.
2- Vitamin B1: waxaa kaloo loo yaqaannaa “Thiamine” wuxuu muhiim u yahay in unugyada jirka ay tamar ka sameystaan cunnada karboohaydaraytka leh, wuxuuna u muhiim u yahay haweenka uurka leh, wuxuu kaloo muhiim u yahay murqaha iyo caafimaadka wadnaha iyo unugyada neerfaha. waxaa lagu fahmaa qofka uu ku yaryahay xanuun barar wadnaha iyo murqaha wadnaha oo weynaado taasoo keento howlgab wadne u gaar ah fitamiin yarida noocaan ah.
3- Vitamin B2: waxaa kaloo loo yaqaannaa “Riboflavin” wuxuu caawiyaa fitamiinnada kale, wuxuuna muhiim u yahay korriinka jirka iyo soo saaridda unugyada cascas ee dhiigga, sidaa darteed dhiig-yarida ayuu ka hortagaa.
Waxaa laga helaa qudaarta, saladka, koostada, ukunta, caanaha iyo hilibka lo’da, caanaha fadhiga iyo saliidda kalluunka.
4- Vitamin B3: Fitamiinkaan waxaa kaloo loo yaqaannaa “Niacin” wuxuu muhiim u yahay maqaarka iyo neerfaha, wuxuu kaloo si gooni ah uga duwan yahay fitamiinada kale in uu hoos u dhigo dufanka dhiigga ee loo yaqaanno “Kolestaroolka“.
Fitamiinkaan waxa jirka ku yareeyo cabidda khamriga, waxaa lagu gartaa markuu jirka ku yaraado dheefshiid xumo, caajis, maqaarka oo si sahlan u dillaaci karo, lalabo, matag iyo diiqad ama niyadjab. markuu jirka uu aad ugu yaraado wuxuu keenaa xanuun loo yaqaano “Pallagra” oo lagu garto maqaarka oo dildillaacsan, shuban badan iyo dhimir beelis.
5- Vitamin B6: Fitamiinkaan waxaa kaloo loo yaqaannaa “Pyridoxine” wuxuu jirka u sameeyaa unugyada dhiigga cascas, wuxuu kaloo kobciyaa shaqada maskaxda, wuxuu kaloo ku caawiyaa borotiinka in uu jirka ka faaidaysto, wuxuu kaloo caawiyaa farriiimaha dareenka ee neerfaha khaas ahaan kuwa addimaha.
6- Vitamin B12: Fitamiinkaan waxaa kaloo loo yaqaanaa “Cobalamin” waa fitamiin aad ugu muhiimsan habdhiska neerfaha jirka, wuxuu kaloo caawiyaa samayska unugyada cascas e jirka, qofka markuu ku yaryahay waxaa laga dareemaa dhiig-yari u gaar ah fitamiinkaan oo loo yaqaano “prenicious anemia” iyo dareenka neerfaha loo jirka ka tago khaas ahaan lugaha oo gaari kara heer in qofka u curyaamo dartiis, laakiin nasiib wanaag waa fitamiin jirka uu keydin karo hadduu qofka ku yaraado waxaa laga isticmaalaa keydka.
7- Vitamin C: waxaa kaloo loo yaqaannaa “Ascorbic Acid” waxuu muhiim u yaha caafimaadka ciridka, ilkaha, maqaarka wuxuu jirka ku caawiyaa inuu cunanda ka nuugo birta, wuxuu kaloo qeyb muhiim ka ciyaaraa raysashada ama boksoshada nabraha iyo isu keenidda maqaarka, markuu qofka ku yaraado waxa ugu horreeya ee lagu fahmo waa cirridka oo dhiigo wuxuuna keenaa xanuunka “Yiridka” waxaa laga helaa yaanyada, liinta, kabajka, baradhada iyo ananaaska.
8- Vitamin D: Wuxuu ka mid yahay fitamiinnada ay soomaalida safiican u taqaano khaas ahaan dadka ku nool dhulalka qabow ama barafka ka da’o waxaa laga helaa qoraxda iyo cunanda. 10 illaa 15 daqiiqo oo qoroxda la isku dhigo 3 jeer usbuucii way ku filan tahay in qofka uu fitamiinkaan ku filnaado, sidaa awgeed dadka meelahaa ku nool waa in fitamiin D-ga ay qaataan. hadduu jirka ku yaraado wuxuu keenaa xanuunka Gedefka “Rickets” iyo lafobeelka “Osteoporosis” wuxuu kaloo fitamiinkaan hadduu jirka ku yaraado yareeyaa maadada kaalsiyamka “Calcium” oo iyadane muhiim u ah lafaha.
9- Vitamin E: Fitamiinkaan wuxuu caan ku yahay in uu sunta jirka ka hortago wuxuu caawiyaa samaysanka unugyada dhiigga cascas, wuxuu kaloo ku caawiyaa jirka inuu ka faa’idaysto fitamiin K-ga.
Waxaa laga helaa kabbajka, kalluunka ukunta, beerka iyo hilibka lo’da.